जापानी अर्बपतिसँग नेपालका सुरेश भट्टराईले घुम्न पाउलान् त चन्द्रमा? (हे’र्नुस भिडियोमा):: Mero Desh
जापानी अर्बपतिसँग नेपालका सुरेश भट्टराईले घुम्न पाउलान् त चन्द्रमा? (हे’र्नुस भिडियोमा)
Published on: २७ चैत्र २०७७, शुक्रबार ११:३०
“गत डिसेम्बरमा जापानी अर्बपति युसाको मेजावाले आफू सँग चन्द्रमा घुम्न जाने जीवन संगिनीको खोजी गरे। सन् २०२३ मा आफूसँग चन्द्रमामा घुम्न जान जीवन संगिनी चाहेको भन्दै उनले आवेदन खुलाएका थिए। त्यसका लागि उनले केही माप’द’ण्ड पनि तोकेपछि व्य”क्तिगत का”रण देखा उँदै उनले मा”फी मागेर उक्त निर्णय फिर्ता गरे।
“केही समयपछि उनले फेरि चन्द्रमा घुम्न जाने अर्को प्रोजेक्ट सुरू गरे। डियर मुन नामक प्रोजे क्टअन्तर्गत उनले संसारभरिका ८ जनालाई आफ्नै खर्चमा चन्द्रमा घुमाएर ल्याउने घोषणा गरे। त्यसका लागि उनले आवे दन खोले।
“टेस्लाका मालिक अर्बपति एलन मस्कको स्पेस एक्सको स्टारसिप रकेटबाट चन्द्रमामा जान युसाकोले सन् २०१८ मै सिट बुक गरिसकेका थिए।अनलाइनमार्फत् लत्ता कपडा बेच्ने जापानी कम्पनी जोजोका संस्थापक ४४ वर्षीय युसा कोसँग चन्द्रमा घुम्न जान भन्दै वि”श्वभरबाट १० लाख बढीले आवेदन दिए।
“तीमध्ये एक जना नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइ””टीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराई पनि थिए।भारतका साथीबाट डियर मुनबारे जानकारी पाएका उनले चन्द्रमा जाने अवसर आए को भन्दै अरूलाई पनि आवेदन भर्न भने।
“सोसाइटीकै पेजबाट पनि प्रचारप्रसार गरे। उनकै विद्यार्थी हरूले पनि आवेदन भरेहामीले चन्द्रमामा जाने मौका पाइ हालिन्छ कि भनेर अरूलाई अप्लाई गर्न भनिराखेका थियौं । विश्वभरबाट १० लाख बढीले आवेदन दिएको देखियो,’ उनले सेतोसाटीसँग भने, ‘नेपालबाट करिब १० हजार जतिले भरे होलान्!’मार्च १४ तारिखमा आवेदन भर्ने समय सकिएको थियो।
“भट्टराई अहिले तेस्रो चरणमा पुगेका छन्। अहिले चन्द्रमा घुम्ने उनको आशा बलियो बन्दै गएको छ।पहिलो चरण: प्रि-रेजिस्ट्रेसन गर्ने बेलामा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण, चाहना हरू व्यक्त गर्ने, कुन-कुन सामाजिक सञ्जाल कसरी प्रयोग गर्ने गरेको छजस्ता कुरा मागिएको थियो।
“दोस्रो चरणमा पनि दुई वटा प्रश्न सोधिएको थियो- आफ्नो रूचीको क्षेत्र/ कामबारे हामीलाई भन्नु?, डियर मुनमा सह भागी भएर आफ्नो परियोजना कसरी विकसित हुन्छ र समा जलाई कसरी योगदान पुर्‍याउनु हुन्छ?ती प्रश्नको उत्तर दिएपछि केही समयअघि उनलाई तेस्रो चरणको लागि छनोट गरिएको हो।
“आफ्नो बारेमा भन्नु अरू जे गरे पनि हुन्छ भनेर भन्योउ नले हतारमै बनाएर ४८ सेकेन्डको भिडिओ बनाएर पठाइ हाले। एकै मिनेटको भिडिओ बनाए फेरि आफू छनोट नहु ने डरले छोटो भिडिओ बनाएको उनले बताए।
“एक मिनेट वा त्योभन्दा लामो भयो भने फालिदिन्छ। जापानमा एकचोटी १० मिनेटको प्रिजेन्टेसन दिँदा ठिक १० मिनेट पछि ल जाऊ सक्यो तिम्रो समय भनेर पठाएका थिए,’ उनले भने,’ अब पनि त्य’स्तै हुन्छ भनेर मैले रिस्क लिइनँ।’
“ते’स्रो चर’णको लागि आफूले सुरूमा प्रयोग गरेको इमे ल र भिडिओको लिङ्कमात्रै मागिएको उनले बताए। यो भिडि ओ पब्लिक पनि गर्न भनेको छ सक्दो सेयर पनि गर भनेको छ। अ’र्कोतिर अ’नलिस्ट पनि गर्न सक्छौं भनेको छ। यसो हेरेर पब्लिक भ्वाइस हेर्न खोजेको हो कि भन्ने लागेर मैले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरें,’ उनले भने,’
“नेपालमा अरूले राखेको देखेको छैन। तर विदेशका टपटप मान्छेहरूको भिडिओ देखें। अब प्रोमोट गर्नुपर्छ भनेर सेयर गरेँ।’ चौथो च’रणमा अनलाइन इन्टरभ्यूका हुनेछ। त्यस बाट पनि छनोट भएपछि पाँचौं चरणको लागि मेसम्ममा अ’न्तिम इन्टरभ्यू र मेडिकल चेकअप गरिनेछ। त्यसपछि ट्रेनिङको लागि बोलाउने उनले बताए।
“म त यसको एक पात्रमात्रै हो। आफ्नो मन भएको क्षेत्रमा लागि राख्यो भने अवसरहरू जुट्न सक्छ। म जान्छु, जान्नँ त्यो छुट्टै कुरा भयो तर आफ्नो सपनाको निरन्तर पछि लागि राख्नपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने,’जसले खुसी दिन्छ त्यही गर्नुपर्छ।
“म गइहालें भने युवाहरूमा आशा जाग्नेछ। आउँदो पुस्ता ले नेपालीहरूले पनि केही गर्न सक्छ भन्ने एउटा मानसिक ता हुन्छ। गर्‍यो भने हुँदो रहेछ भन्ने सोच्न थाल्छ भन्ने हो,’ उनले भने,’ अहिले म एकदम ह’र्षित छु। पठाओ चढ्दा पनि अहिले म पठाओ चढ्दै छु केही समयपछि म र’केट च’ढ्दै हुनेछु भन्ने सोच्न थालेको छु।’